Umkhiqizi wePhaneli yeSolar China, Factory - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Iphaneli Yelanga
Amandla elanga ngumthombo wamandla aluhlaza ovuselelekayo ongashi, amalambu elanga, don’Ungakhathazeki ngogesi obizayo, don’ngikhathazeke ngokungakhanyi ngokwanele! Ochwepheshe bokonga amandla bangakunika izimanga ezingalindelekile!
Ngalesi sikhathi, singafaka isethi ye-ukuphepha ekhaya+SolarIphaneliukukhanyisaekhaya ndawonye?
Singabakhiqizi nabahlinzeki be- Iphaneli Yelanga abaqeqeshiwe e-China, abakhethekile ekunikezeni insizakalo eyenziwe ngezifiso. Uma uzothenga ikhwalithi ephezulu ye- Iphaneli Yelanga esitokweni, wamukelekile ukuthola ikhotheshini efektri yethu.